विवादित महरा ‘भूरा माछा’ मात्रै हुन् ? « Pahilo News
विवादित महरा ‘भूरा माछा’ मात्रै हुन् ?
प्रकाशित मिति : 16 January, 2017 10:53 am
३ माघ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबभन्दा बढी अवसर पाउने र सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहँदा आएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नाम पछिल्लो सुन तस्करीमा जोडिएपछि उनले भने, हामी त भूरा माछा हौँ, ठूला माछा अरु नै छन् ।
अर्थमन्त्री महराको स्वीकारोक्तिपछि प्रश्न उब्जेको छ, के उनी साँच्चै ‘भूरा माछा’ नै हुन् त ? तथ्यहरुले त्यस्तो बताउँदैनन् । किनभने, अहिलेसम्म माओवादी जति पनि आर्थिक काण्डमा मुछिएको छ, त्यसका प्रमुख पात्र उनै महरा छन् ।
राजनीतिक रुपमा महरा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट थिएनन्, मोहन बैद्यसँग निकट थिए । तर, अध्यक्ष दाहालसँगको आर्थिक सम्बन्धका कारण नै उनी अन्ततः दाहालका पक्षमा लाग्न बाध्य भएको माओवादीकै नेताहरु स्वीकार गर्छन् । एक नेताले पहिलो न्युजसँग भने, ‘खरिपाटी भेलासम्म पनि उहाँ मोहन बैद्यकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र राजनीतिक रुपमा बैद्यकै लाइन ठीक हो भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । तर, पछि बदलिनुभयो ।’
पछिल्लो समयमा महरामाथि अख्तियारमार्फत कसिएपछि उनी एकाएक लाइन मिलाउन दिल्ली पुगेका थिए । त्यही क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा मिलाएर केपी ओलीलाई हटाउन उनी सक्रिय भएका थिए । पहिला चीन निकट भनेर चिनिने महराले भारतीय योजनालाई साथ दिएपछि एकाएक अख्तियारले उनीमाथिको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गरेर मन्त्री बन्ने बाटो खुृल्ला गरिदिएको थियो ।
अहिलेसम्म महरा कम्तीमा चार ठूला काण्डमा मुछिएका छन्, जसले उनलाई भुरा माछा भन्न सुहाउँदैन ।
लडाकु शिविरमा २ अर्ब घोटाला
शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीले महराकै नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेकाले लडाकु समायोजनलगायतका विषयमा उनैले सरकारसँग डिल गरेका थिए । यसक्रममा माओवादी लडाकुका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम महराले एकमुृष्ट बुझेर लान्थे. । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत सरकारी रकम लिँदा तलब बुझेको भर्पाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा शान्ति प्रक्रियाका नाममा महराले एउटै चेकबाट ४८ करोडसम्म रकम बुझेका थिए ।
यसरी सरकारबाट बुझेको रकम महराले लडाकुलाई दिँदा रहेनछन् भन्ने कुरा लडाकुहरुले नै सार्वजनिक गरेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । भृकुटीमण्डपमा आयोजित विस्तारित बैठकमा यो विषय चर्को रुपमा उठेपछि अध्यक्ष दाहालमाथि नै कुर्सी प्रहार भएको थियो र विवाद मत्थर पार्न पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनेको थियो । तर, त्यसको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यस काण्डका प्रमुखका रुपमा स्थापित महरालाई कसरी भूरा माछामा सीमित गर्न सकिएला र ?
अजय सुमार्गीलाई टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका महराले अध्यक्ष दाहालसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यापारी अजय सुगार्गीलाई टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी दिँदा ठूलो घोटाला भएको ठहर सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । दाहालको निर्देशन तामेल गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने भएकै कारण महराले आर्थिक मामिला सम्हालेको बताइन्छ । स्रोत भन्छ्, ‘त्यही क्रममा दाहालले नै सुमार्गीलाई लाइसेन्स दिन दवाव दिएका थिए र उनले त्यो काम गरेका थिए ।’
सांसद किन्न चिनियासँग ५० करोड माग
०६७ असार १६ गते माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका क्रममा महरा नराम्ररी एक्स्पोज भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका दाहालले संसद्मा पटकपटक हारेपछि सांसद किनेर पनि जित्ने योजनामा रहँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा उनै महराले पाएका थिए ।
यसक्रममा सांसद किन्नका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड मागेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । टुटेफुटेको अंग्रेजीमा महराले ५० जना सांसद आवश्यक भएकाले त्यसका लागि आफूहरुलाई ५० करोड रकम चाहिएको कुरा खुलेरै बताएका थिए । त्यतिबेला भारतीय पक्षबाट टेप गरेर वितरण गरिएको आशंका भएको उक्त अडियो प्रकरणका बारेमा कहीँकतै छmलफल भएन । अब प्रश्न उठ्छ, एउटै डिलमा ५० करोडको कुरा गर्ने मानिस कसरी भूरा माछा हुन सक्छ ?
अकुत सम्पत्तिमा अख्तियारमा मुद्दा
अर्थमन्त्री महराले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो । माओवादीलाई कुनै हालतमा पनि नछुने सपथसहित अख्तियार प्रमुख भएका लोकमानसिंह कार्कीले समेत महरालाई जोगाउन नसकेपछि बाध्य भएर उनलाई अख्तियारले तानेको थियो ।
घरजग्गा, सम्पत्ति सबै छाडेर भूमिगत भएका महरासँग शान्ति प्रक्रियामा आएको छोटो अवधिमै करोडौँको सम्पत्ति र नगद हुनुलाई अख्तियारले स्वाभाविक मान्न सकेको थिएन ।
तर, दिल्ली गएर नेपालमा सरकार परिवर्तन गराउँछु भन्दै उनले सम्झौता गरेर आएपछि उतैको निर्देशनमा चल्ने लोकमानसिंह कार्कीले मन्त्री बन्ने अघिल्लो दिन उनको मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए ।
अब प्रश्न उठ्छ- यति ठूला काण्डमा मुछिएको व्यक्ति कसरी भूरा माछा हुन सक्छ र ? यदि महरालाई पनि भूरा माछा मान्ने हो भने ठूला माछा कसलाई भन्ने ?